Maninona ny ekipa mpivarotra sy marketing no mila Cloud ERP | Martech Zone
Maninona ny ekipa mpivarotra sy marketing no mila ERP Cloud
Talata, Oktobra 6, 2020 Alatsinainy Oktobra 5, 2020 Ajoy Krishnamoorthy
Ny mpitarika marketing sy ny varotra dia singa iray lehibe amin'ny fampandehanana ny fidiram-bolan'ny orinasa. Ny departemanta marketing dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny orinasa, amin'ny antsipirihany ny momba azy, ary ny fametrahana ireo manavaka azy. Ny marketing dia miteraka fahalianana amin'ny vokatra ary miteraka fitarihana na vinavina. Ao anaty fampisehoana, ny ekipa mpivarotra dia mifantoka amin'ny famadihana ireo vinavina ho an'ny mpanjifa mandoa. Ireo asa dia mifamatotra akaiky ary manakiana ny fahombiazan'ny orinasa iray manontolo.
Raha jerena ny vokany eo amin'ny varotra sy ny varotra dia zava-dehibe ny hampiasan'ny mpanapa-kevitra fanapahan-kevitra ny fotoana sy ny talenta azony, ary mba hahitan'izy ireo izany fomba fiasan'ny ekipa manerana ny vokatra rehetra izany. Ny fandrosoana amin'ny haitao dia nanamora ny fahazoana ny fotoana tena fampahalalana momba ny mpiasa sy ny mpanjifa. Ny tena manokana dia ny teknolojia ERP miorina amin'ny rahona no manome ireo tombony ireo.
Inona ny Cloud ERP?
Cloud ERP dia lozisialy ho serivisy (SaaS) mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny lozisialy Enterprise Resource Plan (ERP) amin'ny Internet. Cloud ERP amin'ny ankapobeny dia manana vidiny ambany kokoa eo alohany satria ny loharanom-pahalalana dia ampanofaina isam-bolana fa tsy voavidy mivantana sy voatazona eo an-toerana. Cloud ERP dia manome ny fidiran'ny orinasa amin'ireo rindran-taratasin'izy ireo manakiana ara-barotra amin'ny fotoana rehetra avy amin'ny toerana rehetra amin'ny fitaovana rehetra.
Ahoana ny fivoaran'ny rahona ERP?
Ny fahalianana sy ny fandraisana ny vahaolana momba ny fitantanana rahona sy finday dia mitombo tato anatin'ny taona vitsy lasa. Ny fampitomboana ny fandrosoana amin'ny teknolojia dia nampiakatra ny fepetra takiana amin'ny fitaovana mifandraika sy angona data amin'ny fotoana tena izy mba hanampiana amin'ny fampahafantarana ny fanapahan-kevitra lehibe momba ny asa. Ny fampiasana fitaovana marani-tsaina toa ny telefaona, takelaka, ary fananana nomerika hafa dia nanova ny toeram-piasana.
Hatramin'ny areti-mandringana COVID-19, ny fangatahana vahaolana cloud sy finday dia nisy nipoaka. Ny filàna mitantana orinasa na aiza na aiza ary amin'ny fotoana rehetra dia nampitombo ny filan'ny fifandraisana rahona. Ity fangatahana ity dia nanjary fananganana haingana ny rafi-pitantanana fandraharahana finday izay manome ny mpiasa ny fahaizana miasa avy any ivelan'ny birao ary mijanona ho havaozina amin'ny angon-drakitra orinasa amin'ny fotoana tena izy. Gartner dia maminavina izany ho an'ny besinimaro hitombo 6.3 isan-jato ny vola miditra amin'ny rahona amin'ny taona 2020. Ankoatr'izay, ny rindrambaiko amin'ny maha serivisy azy (SaaS) dia mijanona ho ampahany lehibe indrindra amin'ny tsena ary tombanana hitombo hatrany amin'ny $ 104.7 miliara amin'ny taona 2020.
Acumatica nahafantatra ny filàna vahaolana cloud sy finday hatramin'ny niorenany tamin'ny 2008, ary manatsara hatrany ny vahaolana hamelomana tsara ny filan'ny orinasa fitomboana midmarket. Vao tamin'ny septambra lasa teo, ohatra, dia nanambara ny famotsorana an'i Acumatica Acumatica 2020 R2, ny faharoa amin'ireo fanavaozana ny vokatra roa taona.
Ny famoahana ny vokatra vaovao dia misy fanavaozana marobe, ao anatin'izany:
Fampidirina miaraka amin'ny lozisialy eCommerce Shopify
Famoronana kaonty mandeha amin'ny alàlan'ny AI / ML mandeha amin'ny alàlan'ny famoronana rakitra izay manamora ny fomba fanomanan'ny mpampiasa angona azo alaina sary amin'ny dashboard, hamakafaka amin'ny latabatra pivot ary hampiasana fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy.
Teratany iray manontolo Vahaolana rindrambaiko POS izay manome ny mpivarotra amidy amin'ny fotoana tena izy, toerana marobe, ary fitantanana trano fitehirizam-bokatra any aoriana miaraka amin'ny scanning barcode. Ankehitriny, ny mpampiasa dia afaka mitantana traikefa omni-fantsona feno nefa tsy misy mpiasa eo an-toerana.
AI / ML-afaka fitantanana vola lany mialoha, izay mampiditra ny fividianana banky elektronika ho an'ny karatry ny orinasa ary mandeha ho azy ny famoronana tapakila handrindrana ny fizotran'ny mpampiasa finday tsotra ary koa ny mpiasan'ny kaonty any aoriana.
Ny fitantanana ny fandaniam-bola dia mifandraika indrindra amin'izao fotoana izao any amin'ny departemanta ara-bola. Ny valanaretina COVID-19 dia nitarika ny orinasa hametraka fanasongadinana vaovao amin'ny fitantanana ny fandaniana, miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fitadiavana faritra hanangonana vola. Ny hetsika tsy mbola fahita tamin'ity taona ity dia nanamafy ny filan'ny orinasa hampiasa vola amin'ny fahitana tsaratsara kokoa, ny fifehezana ny vidiny ary ny mandeha ho azy. Ireo lohalaharana dia mila loharanom-pahalalana, mihoatra noho ny hatramin'izay, mba handraisana fanapahan-kevitra momba ny fandraharahana. Ny fahaiza-mianatra milina vaovao an'i Acumatica dia hihamahay kokoa rehefa mandeha ny fotoana, mianatra avy amin'ny fanitsian-tsoratra momba ny angon-drakitra nafarana mba hanamora ny fizotry ny ara-bola iraisana ary hitsitsy vola ny orinasa.
Ahoana no ahafahan'ny Cloud ERP manohana ny varotra sy ny marketing?
Cloud ERP dia afaka manome ny ekipa mpivarotra amin'ny fomba feno ny fahafaha-manao, ny fifandraisana ary ny hetsika rehetra misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitry ny varotra. Ho fanampin'izay, ny fanendrena firaka sy ny onjam-piasana dia afaka manampy amin'ny fitantanana ny fizotry ny varotra hanatsarana ny fahombiazany. Ny fitaovana ERP dia manatsara ny fikorianan'ny fampahalalana, mampihena ny tsingerin'ny varotra ary mampiakatra ny taha akaiky.
Ho an'ny ekipa marketing, cloud ERP dia afaka manohana ny vahaolana varotra mitambatra, mifamatotra mafy amin'ny fitantanam-bola sy ny fitantanana atiny. Ny fananana vahaolana marketing iraisana dia afaka manatsara ny fiaraha-miasa eo amin'ny varotra, ny varotra ary ny fanohanana ary koa ny fiantohana ny ROI faran'izay betsaka amin'ny dolara marketing rehetra laniana. Miaraka amin'ny rafitra ERP, ny ekipa marketing dia afaka mampiasa ny rafitra Fifandraisan'ny Fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM) ihany koa hitantanana fitarihana, hanatsara ny fiovam-po, handrefesana ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra, hifandraisana amin'ny fifandraisana ary hanatsarana ny vokatra. Izy ireo koa dia afaka misambotra fitarihana avy amin'ny endrika tranonkala, lisitra novidiana, dokam-barotra, mailaka mivantana, hetsika ary loharano hafa.
Noho ny rafitr'izy ireo miorina amin'ny tranokala, ny ankamaroan'ny fanolorana ERP dia miaraka amin'ireo API ho fampidirana haingana ireo fitaovana sy programa lozisialy misy fitsikerana. Ny tombony ho an'ny ekipa fivarotana sy marketing dia be, anisan'izany ny fampiharana haingana sy mora kokoa ary ny fotoana fohy ho an'ny paikadin'ny finday. Amin'ny fampiharana vahaolana rahona ERP, ny ekipa mpivarotra sy ny varotra dia afaka mahazo fifehezana bebe kokoa amin'ny fizotrany ary hahatakatra tsara kokoa ny asany amin'ny fotoana tena izy. Izy ireo dia afaka mitazona ny famokarana avo lenta amin'ny alàlan'ny fanomezana ny mpiasa fidirana an-tserasera amin'ny fampahalalana vaovao hatrany na avy aiza na aiza mampiasa fitaovana rehetra amin'ny fotoana rehetra.
Tags: acumaticaAPIvidin'ny tahiryERPfitantanana ny fandaniana-barotramarketing erprindrambaiko posvarotrashopify
Ajoy dia manana traikefa mihoatra ny 15 taona amin'ny indostria amin'ny andraikitra ara-teknika, marketing ary fitarihana. Talohan'ny Acumatica, Ajoy dia tao amin'ny Microsoft nitondra fahombiazana tamin'ny sehatry ny fitantanana vokatra sy ny varotra andraikitra vao haingana izay talen'ny OEM Segment Marketing izay izy sy ny ekipany no tompon'andraikitra amin'ny paikady mandeha eny an-tsena manerana ny mpivarotra sy ny mpanjifa. .
Mamelombelona ny fiaraha-monina: Avereno amin'ny media sosialy ny atiny taloha
Fanamby sy fanararaotana amin'ny raharaham-barotra miaraka amin'ny valanaretina COVID-19